Ilaalada Xeebaha Liibiya Oo Badbaadiyey 250 Qof Oo Tahriibayaal Ah – Goobjoog News
Ciidamada ilaalada xeebaha Libya ayaa badbaadiyey in ka badan 250 qof oo muhaajiriin aha, kuwaasi oo doonayey in dooman yaryar ay uga baxaan Libya.
Muhaajiriintaan la badbaadiyey ayaa waxay ku sii jeedeen dalka Talyaaniga halkaasi oo ay rabeen in si sharci darro ah ay ku galaan.
Xeebaha galbeed ee Libya ayaa waxay noqdeen meelaha ugu waaweyn oo ay ka dhoofaan dadka tahriibiyaasha ah intooda badan waxay ka soo jeedaan dadkaani dowladaha ka hooseeya saxaraha waxayna doonayaan inay galaan wadamada Yurub iyaga oo wadamadooda uga cararaya Saboolnimada iyo dagaalada ka jira.
Waxaa hoos u dhacay tirada dadka tahriibiyaasha ah oo gaaraya Talyaaniga tan iyo bishii July ee sanadkaani marka lala barbardhigo sanadkii hore, ka dib markii mas’uuliyiin ka shaqeeya dowladda ay taageereyso qaramada midoobey ay ka shaqeeyeen in hoos loo dhigo howlaha Tahriibka ee ka socda magaalada Sabratha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Iyo Mas’uuliyiin Kale Oo Gaaray Baydhabo